200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Shabaab baxsad ah oo gaaray gobolka Bari (Xagee tageen?) | Shabakada Warbaahinta Times
Shabaab baxsad ah oo gaaray gobolka Bari (Xagee tageen?)
Boosaaso (Caasimada Online) – Saraakiil iyo dagaal-yahano ka tirsan Ururka Al Shabaab oo baxsad ah, ayaa waxaa la soo sheegaya in ay gaareen Buuraleyda Galgala ee Gobolka Bari, iyagoo ku tagey doomaha nooca dheereeya.
Saraakiishan iyo dagaal-yahanada Ururka Al Shabaab ka tirsan, ayaa ka soo baxsaday duqaymaha diyaaradaha dagaalka Mareykanku, ay ka wadaan Gobolada Koonfurta Somaliya.
Xubnahan oo toddobaadkii hore soo gaaray Gobolada Hiiraan iyo Galgaduud, ayaa uga sii gudbay Degmada Xarardheere ee Gobolka Mudug, iyadoo ayna kaga sii tallaabeen Galgala.
Ilo wareedyo, ayaa sheegaya in Saraakiisha Shabaabka ee gaaray Buuraleyda Galgala ay u badan yihiin Saraakiisha Shabaabka ee maleeshiyadooda dagaalka gelisa, kuwaa oo dadka qaarkii ay u garanayan (Madaxda Jabhadaha).
Khubarada, ayaa waxay Dowladda Somaliya ugu baaqayan inay guluf dhanka dhulka ah ku qaado deegaanada, ay ka baxsanayan inta badan maleeshiyada Al Shabaab, ee duqaymuhu ku socdaan.
Mareykanka oo ballaariyay duqaymaha ka dhanka ah Ururka Al Shabaab, ayaa keentay in Shabaabku isu kala qaybiyan magaalooyinka iyo deegaanada kale ee dalka, iyagoo yareeyay tirada askartooda ku sugan deegaanada ay ka arrimiyan.
Toddobaadyadii la soo dhaafay, ayaa waxaa Koonfurta Somaliya ka dhacay duqaymo is xig xigay, oo diyaaradaha dagaalka Mareykanku ay la beegsadeen saldhigyo ay Shabaabku leeyihiin.
Axmed Macalin Fiqi, Agaasimihii hore ee Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA) ahna Xildhibaan Golaha Shacabka ka tirsan, ayaa tallaabada uu Mareykanka ku ballaariyay duqaymihiisa ka dhanka ah Al Shabaab ku macneeyay fursad loo baahan yahay inay ka faa’iideysato Dowladda Somaliya.
Bishii hore ee November oo ay dalka ka dhaceen duqaymihii ugu badnaa ee ay gaysteen diyaaradaha Mareykanka, ayaa waxay Shabaabku khasbeen in ay cagaha wax ka dayaan.
The post Shabaab baxsad ah oo gaaray gobolka Bari (Xagee tageen?) appeared first on Caasimada Online.